Ntag203 Chip ကဒ်, Ntag213 Chip PVC Card ကို, Ntag215 အင်းလေး Card ကို
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို Ntag203 Chip ကဒ်, Ntag203 Plastic Card, Ntag213 Chip PVC Card ကို, Ntag213 inlay PVC Card, Ntag215 အင်းလေး Card ကို, Ntag215 Inlay Plastic Card
ပရိုတိုကော: ISO ကို 14443A
အသုံးပြုသူသိုလှောင်မှု: 144က byte, 504က byte, 888က byte
R / W ကိုအကွာအဝေး: 2-10စင်တီမီတာ (အဆိုပါအင်တင်နာဒီဇိုင်းအညီ)
ခဲဖျက်: 100,000 ကြိမ်
ကဒ်ပစ္စည်း: PVC / PET / PETG / ကို ABS / စက္ကူ
အရွယ်: 85.5× 54 × 0.84mm,ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်
အကြံပြုသိုလှောင်မှုအခြေအနေများ: အပူချိန် -25 ℃ ~ + 50 ℃
စိုစွတ်ခြင်း: 20%~ 90% RH အ
NTAG203, NTAG213, and NTAG215 developed by NXP Semiconductors, used as standard NFC tag ICs in conjunction with NFC devices or NFC-compliant proximity coupling devices forawide range of market applications such as retail, gaming and consumer electronics, စသည်တို့ကို. The NTAG203, NTAG213, NTAG215 (later known as NTAG21x) is designed to fully comply with NFC Forum Type2tags and ISO/IEC14443 Type A specifications.
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အဖွဲ့ဝင်ကတ်များ, VIP cards, Medicare/company/school card, public transport card, highway fees, ကားရပ်ခြံ,စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Ntag203 Chip Card, Ntag213 Chip PVC Card ကို, Ntag215 အင်းလေး Card ကို
prev: Impinj Monza3 Chip ကဒ်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ISO18000-6C Card ကို
နောက်တစ်ခု: Mifare Ultralight Chip အင်းလေး Card ကို